Mashoko Akanaka Akanyorwa naMako 16:1-8
Jesu anomutswa (1-8)
16 Saka Sabata+ parakanga rapfuura, Mariya Magadharini, naMariya+ amai vaJakobho, naSarome vakatenga zvinonhuhwirira kuti vaende vanozora chitunha chake.+ 2 Vakasvika paguva* mangwanani-ngwanani, zuva richangobuda, pazuva rekutanga revhiki.+ 3 Vaitaurirana vachiti: “Ndiani achatikungurutsira dombo riri pasuo reguva?” 4 Asi pavakatarisa, vakaona kuti dombo racho rakanga ratokungurutswa, kunyange zvazvo rakanga rakakura chaizvo.+ 5 Pavakapinda muguva, vakaona rimwe jaya rakagara nechekurudyi rakapfeka nguo refu chena, uye vakavhunduka. 6 Iro rakati kwavari: “Musavhunduka.+ Ndiri kuziva kuti muri kutsvaga Jesu wekuNazareta akarovererwa. Akamutswa. Haapo pano.+ Tarisai muone, apa ndipo paanga akaradzikwa.+ 7 Asi endai munoudza vadzidzi vake naPetro kuti, ‘Ari kufanotungamira kuGarireya.+ Muchamuona ikoko, sezvaakakuudzai.’”+ 8 Saka pavakabuda, vakatiza paguva racho, vachidedera uye vachishamiswa zvikuru. Uye hapana munhu wavakataura naye nekuti vaitya.*+
^ Kana kuti “paguva rekuyeukwa.”
^ Maererano nezvinyorwa zvinovimbwa nazvo zvepakutangatanga, Evhangeri yaMako inopera nemashoko ari muvhesi 8. Ona Mashoko Ekuwedzera A3.